Mushkiladda heysata Qoysaskeenna Yurub ku nool. | Radio Himilo
Home / MAQAALO / Mushkiladda heysata Qoysaskeenna Yurub ku nool.
Muqdisho – Dhaqankeennu wuxuu hadiyo jeer ahaa mid ku ilaashan isku xirnaanta iyo ka tilmaansiga hiddaha xeesha dheer ee awoowayaasheen. Dhaqanku wuxuu lahaa xeer iyo shuruuc degsan oo lagu wada arooro iyo hidde, dhaxal ahaan, lagaga daydayo jiilalkeennii hore.
Previous: Manchister United oo ku dhawaaqday heshiiska Nemanja Matic.
Next: Laacib Muslima ah oo kooxdiisa kaga tagaya astaanteeda Macatabka